नक्कली सुन काण्डमा नयाँ ट्वीस्ट : पीडित बनेर प्रहरी कार्यालय धाउने व्यक्ति नै फरार नक्कली सुनको नेक्सस ६ करोड ऋणसँग?
नारायण अधिकारी बिहीबार, भदौ २५, २०७७, १२:५३
काठमाडौं-गत साउन १३ गते सुन्धारामा बरामद भएको साढे १५ किलो नक्कली सुन, आधा किलो सक्कली सुन र दुईवटा पेस्तोल काण्डमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराधको कसुरमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधानअनुसार म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले घटनालाई मिहिन ढंगले केलाइरहेको छ।
उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा इल्ताफ हुसेन अन्सारी, निलेश शाखिया, कौशल पटेल, देवानसिंह पटेल, विजय पटेल, प्रहरी जवानद्वय प्रसन्न श्रेष्ठ र बहादुरसिंह कडायत, प्रसन्नका घरबेटी उमेश श्रेष्ठ, कालिगढ मनिष मल्लिक, ज्वेलरी सञ्चालक श्रीनिवास उपाध्याय र विजय ताम्राकार गरी ११ जना प्रहरी हिरासतमा छन्।
घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका भारतीय नागरिक सञ्ज पटेल र विकास अग्रवाल भने फरार छन्। घटनाको गुत्थी केलाइरहेको परिसरले अनुसन्धान अन्तिम बिन्दुमा पुगेको जनाएको छ। परिसरका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले भने, ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अबको केही दिनमा मुद्दा दायर गर्छौं।’
अनुसन्धान अन्तिम बिन्दुमा पुग्नै लाग्दा घटनामा एकपछि अर्को नयाँ ट्वीस्ट देखिएको छ। योे सुनकाण्डमा व्यापारी विकास अग्रवाल पनि जोडिएका छन्। प्रहरीकै मिलेमतोमा नक्कली सुन काण्डमा अभियुक्त भगाएको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले भारतीय नागरिक विकास अग्रवालको पनि संलग्नता देखाएको हो। अग्रवाल न्युरोडमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए।
चाँदीमा लेप लगाएर सुन बनाउनका लागि करिब ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। उक्त रकम भारतबाट कसरी भित्रियो भन्नेबारे महानगरीय प्रहरी काठमाडौंले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा रकमको बन्दोबस्त न्युरोडमा व्यापार गर्दै आएका उनै अग्रवालतिर सुई सोझिएको प्रहरीका एक अधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए। ‘उक्त रकम भारतबाट हुण्डीमार्फत् नेपाल भित्रिएको पाइएको छ। यसको सबै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अग्रवालले गरेको देखिन्छ’ एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
पीडित भनिएका व्यक्ति नै फरार
नक्कली सुन काण्ड हुनुभन्दा एक महिनाअघि असार ७ गते दिउँसो न्युरोडबाट उनै अग्रवालको १० लाख रुपैयाँ लुटपाट भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि अग्रवालले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी पनि दिए।
सिसीटिभी फुटेजअनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका सादा पोशाकमा काम गर्ने हवल्दार धीरेन बिष्ट र २ नम्बर गणमा कार्यरत सिपाही विक्रमकुमार चन्द पक्राउ परे। अग्रवाल पीडित बन्दै प्रहरी कार्यालय धाइरहे।
तर जब साउन १३ गने सुन्धाराबाट नक्कली सुन बरामद भयो। त्यसपछि अग्रवाल पनि फरार भए। पहिला पीडित बनेर प्रहरी कार्यालय धाउने अग्रवाल अहिले भने प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। प्र्रहरीले गरेको अनुसन्धानले नक्कली सुन खरिदका लागि भारतबाट हुण्डीमार्फत् पैसाको व्यवस्था उनै अग्रवालले गरेको देखाएको छ।
१० लाख लुटियो भनेकाले अग्रवालले आफूले न्यूरोडकै समृद्धि ऋण तथा सहकारीबाट १७ लाख रुपैयाँ निकालेको बताएका थिए। तर प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा अग्रवालले त्यसदिन ४० लाख रुपैयाँ निकालेको पाइएको छ। ८ लाख दरका पाँच वटा चेकमार्फत् उनले ४० लाख रुपैयाँ निकालेर लगेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
‘निकालेको ४० लाख रकम नै प्रहरीलाई बताउँदा रकमको स्रोत खुलाउनु पर्ने भएपछि उनले ढाँटेर १७ लाखमात्रै भनेका हुन्। अग्रवालले हुण्डीमार्फत् आएको रकम सहकारीमा राख्ने र चाहिएको बेला निकाल्ने गरेको देखिएको छ’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, त्यसबेलाको रकम पनि नक्कली सुनको बन्दोबस्तको गर्नका लागि हुुण्डीमार्फत् आएको हुनसक्छ।’
नक्कली सुन काण्ड कारोबारका लागि हुण्डीमार्फत् रकमको बन्दोबस्तो मिलाएको अनुसन्धानमा खुलेपछि पहिला पीडित बनेर प्रहरी कार्यालय धाउने अग्रवाल नै अहिले फरार भएको प्रहरीको दाबी छ। आफैं वादी बनेर दिएको १० लाख लुटपाटको मुद्दामा समेत उनी अदालतमा बयान दिन उपस्थित भएका छैनन्। न उनले कसैलाई वारेसनामा नै दिएर पठाएका छन्।
६ करोड भारु तिर्न नसक्ने भएपछि लुटपाट?
उक्त सुन काण्डको आरोपमा पक्राउ परेका अर्का व्यक्ति हुन् निलेश शखिया। भारतीय नागरिक शखिया फिल्म निर्मातासमेत हुन्। उनले बनाएका फिल्म फ्लप भए। फिल्ममा लगाएको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भयो।
फिल्म बनाउने क्रममा उनले हाल फरार रहेका भारतीय नागरिक सञ्जय पट्टेसँग ऋण लिएका थिए। सुन काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सञ्जयबाट निलेशले पटक–पटक गरेर ६ करोड भारुभन्दा बढी रकम लिएको विवरण भेटिएको छ। जसकारण यो लेनदेनसँग पनि नक्कली सुनकाण्ड जोडिएको हुनसक्ने आशंका गरेका छौं।’
सञ्जयले ऋण वापत लगेको रकम फिर्ता गर्न निलेशलाई दवाव दिने, तर निलेशले तिर्न नसक्ने भएपछि सो वापतको सुन दिने शर्त राखेको हुनसक्ने प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसका लागि पहिल्यैदेखि चिनजानमा रहेका बाराका इल्ताफ हुसेन अन्सारीको सहयोग निलेशले लिएको र लाजिम्पाटमा व्यापार गर्दै आएका दाजुभाई कौशल पटेल र देवानसिंह पटेलले बनाएको योजनामा प्रहरीसँग मिलेर लुटपाट गराएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ।
तर घटनाको आरोपमा पक्राउ परेका इल्ताफले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको र गाडी सहयोग मागेकोमा उपलब्ध मात्रै गराएको बयान दिएका छन्। जसकारण घटनामा ऋण वापतको ६ करोड भारुमात्रै जोडिएको हुनसक्ने विश्लेषण पनि प्रहरीले गरेको छ। इल्ताफ नक्कली भारु नोट कारोबारी हुनु र भारतले उनीमाथि शंकाको नजरले हेरिरहनु जस्ता कारणले यो घटना संन्देहपूर्ण देखिएको एक पूर्वप्रहरी अधिकारीले बताए।
३२ दिन लामो अनुसन्धानपछि खुल्यो कहाँबाट आयो सुनको बिस्कुट?
सुनकाण्डको अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले ३२ दिन लामो अनुसन्धानपछि भदौ १५ गते थप दुई व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ। न्युरोडको लक्की ज्वेलर्सका श्रीनिवास उपाध्याय र अष्टमंगल ज्वेलर्सका विजय ताम्राकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
नक्कली सुन काण्डको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले आधा किलो सुनको बिस्कुट भने कहाँबाट आयो भन्नेतर्फ पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। कानुनः राष्ट्र बैंकबाट किनेको सुनको बिस्कुट सिंगै बेच्न मिल्दैन। गहना बनाएर बेच्नुपर्ने हुन्छ। तर नक्कली सुनसँगै बरामद भएको आधा किलो सुन भने ढिक्का नै थियो।
सोही अनुसन्धान गर्ने क्रममा यी दुई व्यापारी पक्राउ परेको परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता सोमेन्द्रसिंह राठौर बताउँछन्।
उनका अनुसार पक्राउ परेका ताम्राकारले आधा किलो उक्त सुन राष्ट्र बैंकबाट किनेका थिए। त्यसपछि त्यो सुन ताम्राकारले उपाध्यायलाई दिएका थिए। उपाध्यायमार्फत् नै त्यो सुन निलेश शखियालाई बेचेको पाइएको एसपी राठौरले बताए। ‘गहना बनाएर बेच्नुपर्ने उक्त सुन उनीहरुले सिंगै बेचेको पाइयो। सोही कारण उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन्’ एसपी राठौरले भने।
उनीहरुले चाँदी भने न्यूरोडकै सिल्भर स्टेटबाट किनेको पाइएको छ। ती पसले भने पक्राउ परेका छैनन्। चाँदी ढिका नै बेच्न पाउने भएकाले उनी पक्राउ नपरेको परिसरले जनाएको छ।
प्रहरीसँग मिलेमतो गरेर बरामदको नाटक गरिएको सुन काण्ड गत साउन १३ गतेको हो। हाल पक्राउ परेकामध्ये कौशल पटेलले गाडीबाट सुन बरामद गर्ने योजना आफ्ना चिनजानका प्रहरी जवान बहादुरसिंह कठायतलाई सुनाएका थिए। त्यसवापत कठायतलाई १५ लाख दिन कौशल तयार भए। त्यसपछि उक्त सामान लुट्ने योजना बन्यो।
कठायतले दिएको यो सूचना श्रेष्ठले वृत्तका प्रमुख डिएसपी रन्जन दाहाललाई सुनाए। कठायतकै सूचना अनुसार एम्बुसिङ गरेर चेकिङमा प्रहरी बस्यो। डिएसपी दाहाल आफैं फिल्डमा खटिए। डिएसपी दाहाललाई गलत लोकेशन दिइयो। सामान बोकेर गाडी आउने ठाउँमा जवान कठायत बसे। नक्कली सुन बोकेको बा ६ च ५५१९ नम्बरको स्कार्पियो कमलादीबाट घण्टाघर हुँदै बाहिरियो।
सुन्धाराको आकाशे पुल नजिक पुगेपछि गाडीमा सवार निलेश शखियाले झरेर जवान कठायतलाई सुन र पेस्तोलको झोला दिएका थिए। त्यसपछि कठायतले उनीहरुलाई भगाएका थिए।